साहित्यिक पत्रकारिता भनेको के हो ? - Subhay Postसाहित्यिक पत्रकारिता भनेको के हो ? - Subhay Post
साहित्यिक पत्रकारिता भनेको के हो ?
सुभाय् संवाददाताMarch 16, 2021 मा प्रकाशित (७ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ५ मिनेट
साहित्यिक पत्रकारिता नन-फिक्शनको एक रूप हो जुन कथागत प्रविधि र शैलीगत रणनीतिहरूसँग मिल्छ जुन परम्परागत रूपमा कथासंग सम्बन्धित छ। लेखनको यो रूपलाई कथा पत्रकारिता वा नयाँ पत्रकारिता पनि भन्न सकिन्छ। शब्द साहित्यिक पत्रकारिता कहिलेकाँही सृजनात्मक नन-फिक्शनको साथ आदानप्रदानको रूपमा प्रयोग हुन्छ; धेरै जसो, तथापि, यो एक प्रकारको रचनात्मक गैर-कल्पनाको रूपमा लिइन्छ।
साहित्यिक पत्रकारहरू, नर्मन सिम्सले आफ्नो आधारभूत तोड्ने क्रममा भने कि साहित्यिक पत्रकारिताले “जटिल र गाह्रो विषयहरूमा डुबाउने माग गर्दछ। लेखकको आवाजले लेखकले काम गरिरहेको छ भनेर देखाउँदछ।”
संयुक्त राज्य अमेरिकाका उच्च सम्मानित साहित्यिक पत्रकारहरूमा आज जोन म्याकफि, जेन क्र्रामर, मार्क सिंगर, र रिचर्ड रोड्स सामेल छन्। विगतका केही उल्लेखनीय साहित्यकारहरुमा स्टीफन क्रेन, हेनरी मेहे, जैक लन्डन, जर्ज ओर्वेल र टम वोल्फ शामिल थिए।
साहित्यिक पत्रकारिताको विशेषता
लेखकहरूले साहित्यिक पत्रकारिताको शिल्पका लागि प्रयोग गर्ने ठोस सूत्र भने छैन, जस्तो कि अन्य विधाहरूको लागि पनि हो, तर सिम्सका अनुसार थोरै लचिलो नियम र साझा सुविधाहरूले साहित्यिक पत्रकारितालाई परिभाषित गर्छन्। “साहित्यिक पत्रकारिताको साझा विशेषताहरू मध्ये डूबिएको रिपोर्टि,, जटिल संरचना, चरित्र विकास, प्रतीकवाद, आवाज, सामान्य व्यक्तिको ध्यान केन्द्रित … र सटीकता हो।
“साहित्यिक पत्रकारहरूले पृष्ठमा चेतनाको आवश्यकतालाई पहिचान गर्दछन् जसको माध्यमबाट दृश्य वस्तुहरू फिल्टर गरिन्छन्। विशेषताहरूको सूची औपचारिक परिभाषा वा नियमहरूको सेट भन्दा साहित्यिक पत्रकारिता परिभाषित गर्न सजिलो तरीका हुन सक्छ। ठीक छ, त्यहाँ केही नियमहरू छन्। , तर मार्क क्रेमरले ‘ब्रेकेबल नियमहरू’ भन्ने शव्द प्रयोग गरे जुन हामीले सम्पादन गरेको एक नृविज्ञानमा थियो। ती नियमहरू मध्ये क्रामरले समावेश गरे:
••Journalists साहित्यकार पत्रकारहरूले आफूलाई विषयको संसारमा डुबाउँछन् …
• साहित्यिक पत्रकारहरूले सटीकता र क्यान्डरको बारेमा निहित सम्झौताहरू काम गर्छन् …
Journalists साहित्यकारहरू प्रायः नियमित घटनाहरूका बारे लेख्छन्।
Journalists साहित्यिक पत्रकारहरूले पाठकको अनुक्रमिक प्रतिक्रियाहरूको आधारमा अर्थको विकास गर्छन्।
… पत्रकारिताले आफूलाई वास्तविकसँग पुष्टि गर्दछ, निश्चित गरिएको छ, जुन केवल कल्पना मात्र गरिएको छैन। … साहित्यिक पत्रकारहरूले सटीकताका नियमहरू पालन गरेका छन् – जसमा धेरैजसो त्यस्तै नै हो – किनकि उनीहरूको कामलाई पत्रकारिता भनेर लेबल गर्न सकिदैन यदि विवरण र चरित्रहरू काल्पनिक छन् भने। ”
किन साहित्यिक पत्रकारिता काल्पनिक वा पत्रकारिता होइन
“साहित्यिक पत्रकारिता” भन्ने शव्दले काल्पनिक र पत्रकारितासँग सम्बन्धको सुझाव दिन्छ तर जान व्हिटका अनुसार साहित्यिक पत्रकारिता अरु कुनै पनि श्रेणीको लेखमा राम्रोसँग फिट हुँदैन। “साहित्यिक पत्रकारिता काल्पनिक कुरा होइन – जनता वास्तविक हुन् र घटनाहरू घटित भए – न त यो पारम्परिक अर्थमा पत्रकारिता हो।
“त्यहाँ व्याख्या, व्यक्तिगत दृष्टिकोण र संरचना र कालक्रमको साथ प्राय: प्रयोगको प्रयोग हुन्छ। साहित्यिक पत्रकारिताको अर्को आवश्यक पक्ष यसको केन्द्रविन्दु हो। संस्थालाई जोड दिनुभन्दा साहित्यिक पत्रकारिताले ती संस्थाहरूबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको जीवन खोजी गर्दछ। ”
किनकि सृजनात्मक नफिक्शन यति उपद्रवी छ, त्यसैले साहित्यिक पत्रकारिताको व्याख्या गर्ने बोझ पाठकहरूमा पर्दछ। “आर्ट अफ लिटरेरी जर्नलिज्म” मा सिम्सले उद्धृत जोन म्याक्फी विस्तृत वर्णन गर्दछन्: “संवाद, शब्दहरू, दृश्यको प्रस्तुतीकरण मार्फत तपाईले सामग्रीलाई पाठकमा बदल्न सक्नुहुन्छ। पाठक creative ० प्रतिशतले रचनात्मक के हुन्छ रचनात्मक लेखन। लेखकले चीजहरू शुरू गर्दछ। ”
साहित्यिक पत्रकारिता र सत्य
साहित्यिक पत्रकारहरूले एउटा गाह्रो चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो। तिनीहरूले तथ्य र वितरित गर्नुपर्दछ हालका घटनाहरूमा ती तरीकाले जुन संस्कृति, राजनीति, र जीवनका अन्य प्रमुख पक्षहरू बारे धेरै ठूलो चित्र सत्य कुरा गर्छन्; साहित्यकार पत्रकारहरू, यदि केहि छन् भने, अन्य पत्रकारहरू भन्दा प्रामाणिकतामा बढी बाँधिएका छन्। साहित्यिक पत्रकारिता एक कारणको लागि अवस्थित छ: कुराकानी सुरू गर्नका लागि।
साहित्यिक पत्रकारिता गैरफिक्शन गद्यको रूपमा रोज वाइल्डरले साहित्य जर्नलिज्मको बारे गैरफिक्शन गद्यको रूपमा कुरा गरे – सूचना लेखन जुन एक कहानी जस्तो बगैंचामा बग्छ र विकास गर्दछ – र यस विधाका प्रभावी लेखकहरूले लिखित साहित्यिक पत्रकार रोज वाइल्डर लेनमा काम गर्ने रणनीतिहरू। “थॉमस बी कन्नीले परिभाषित गरेझैं साहित्यिक पत्रकारिता भनेको ‘नन्फिक्शन प्रिन्ट गद्य हो जसको प्रमाणित सामग्रीलाई कथा वा स्केचमा रूपान्तरण गरिएको हुन्छ जसमा कथा र बयानात्मक प्रविधिको प्रयोग गरेर सामान्यतया कथासंग सम्बन्धित छ।’ “यी कथाहरू र स्केचहरूको माध्यमबाट लेखकहरूले बयान गरिएको वा व्यक्तित्व र संस्कृतिको बारेमा व्याख्या प्रदान गर्छन्। ‘ नर्मन सिम्सले यो परिभाषालाई थप पढाई दिएका विधा आफैले पाठकहरूलाई ‘अरूको जीवन हेर्न’ अनुमति दिन्छ जुन प्रायः हामी आफैंले ल्याउन सक्ने भन्दा अझ स्पष्ट प्रसंगमा सेट गर्दछौं। ‘ “उहाँ अझै सुझाव दिनुहुन्छ, ‘साहित्यिक पत्रकारिताको बारेमा आन्तरिक राजनीतिक र कडा प्रजातान्त्रिक कुरा छ – त्यो बहुलवाद, व्यक्तिगत-समर्थक, क्यान्ट विरोधी र एलिट एलिट।’ यसबाहेक, जोन ई। हार्टस्कले औंल्याएझैं धेरै जसो साहित्यिक पत्रकारिताको रूपमा लिइन्छ। धेरै हदसम्म पेशागत पत्रकार वा ती लेखकहरूले लेखेका हुन् जसका औद्योगिक उत्पादनका साधनहरू अखबार र म्यागजिन प्रेसमा फेला पर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई कमसेकम अन्तरिम डे प्रत्यक्ष पत्रकारहरूको लागि। उनी भन्छिन्, “साहित्यिक पत्रकारिताका धेरै परिभाषाहरू सामान्य छन् कि यो काममा पनि केही उच्च सत्य हुनुपर्दछ; यी कथाहरू आफैंलाई पनि एक ठूलो सत्यको प्रतीकात्मक भन्न सकिन्छ।”
साहित्यिक पत्रकारिताको पृष्ठभूमि
पत्रकारिताको यो छुट्टै संस्करणको शुरुवात बेन्जामिन फ्रान्कलीन, विलियम हेजलिट, जोसेफ पुलित्जर, र अन्य जस्ताको मनपर्दो हो। “[बेन्जामिन] फ्रान्क्लिनको साइलेन्स डोगुड निबन्धले साहित्यिक पत्रकारितामा उनीहरुको प्रवेशलाई चिन्हित गर्‍यो,” कार्ला मलफोर्डले थाल्यो। “साइलेन्स, व्यक्तित्व फ्रान्क Frank्कलिनले साहित्यिक पत्रकारिता लिनु पर्ने फार्ममा बोल्छन् – यो सामान्य संसारमा अवस्थित हुनुपर्दछ – यद्यपि उनको पृष्ठभूमि सामान्यतया अखबारको लेखनमा फेला परेन।”
साहित्यिक पत्रकारिता अहिलेको दशकौं भइसक्यो र यो २० औं शताब्दीको अन्ततिरको नयाँ पत्रकारिता आन्दोलनमा धेरै जोडिएको छ। आर्थर क्रिस्टलले विधालाई परिष्कृत गर्न निबन्धकार विलियम ह्याजल्टले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाबारे बोले: “सन्‌ १९६० को दशकका न्यू जर्नालिस्टहरूले हाम्रो नाकलाई उनीहरूको अहंकारमा बगाउनु भन्दा सय पचास वर्ष अगाडि [विलियम] ह्याजल्टले आफूलाई आफ्नो काममा मेन्टरमा राखे कि केहि पिढि पहिले सोच्न सकिएन “।
रोबर्ट ब्यान्टनले साहित्यिक पत्रकारिता र नयाँ पत्रकारिताबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्छ, दुई सर्तहरू जुन एक पटक छुट्टिन्थ्यो तर अब प्रायः आदानप्रदानको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। “सन् १८८० को दशकमा ‘न्यू जर्नलिज्म’ भन्ने वाक्यांश पहिलो पटक अमेरिकी प्रसंगमा देखा पर्‍यो जब यो सनसनीवाद र क्रुसेडि। पत्रकारिताको मिश्रणको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो – जुन आप्रवासीहरू र गरिबहरूको तर्फबाट गरिएको थियो – जुन न्यूयोर्क वर्ल्ड र अन्य कागजातहरूमा पाइन्छ। यद्यपि यो ऐतिहासिक रूपमा [जोसेफ] पुलिट्टरको नयाँ पत्रकारितासँग सम्बन्धित छैन, लिinc्कलन स्टिफेन्सले ‘साहित्यिक पत्रकारिता’ भनेर चिनिने लेखनको शैलीले यसका धेरै लक्ष्यहरू साझा गरेको थियो। ”
बोएन्टन साहित्यिक पत्रकारिताको सम्पादकीय नीतिसँग तुलना गर्न गयो। ” सन् १८८० को दशकमा न्यु योर्क वाणिज्यिक विज्ञापनदाताको सह सम्पादकको रूपमा, स्टीफन्सले साहित्यिक पत्रकारिता गरे – जनतालाई चिन्ताको विषयको बारेमा कथात्मक कथा सुनाए – सम्पादकीय नीतिमा जसले कलाकार र पत्रकारको आधारभूत लक्ष्यलाई जोड दिए (subjectivity, इमान्दारी, समानुभूति) उस्तै थिए।